Go-aanka Hawiye iyo gudiyo la dhisay? Hawiye maxay rabaan? Jawaab |
Go-aanka Hawiye iyo gudiyo la dhisay? Hawiye maxay rabaan? Jawaab
Inta aanan u gelin faahfaahinta gudiyadda la dhisay waxay qof walba isweydiineysaa su-aal la xiriirta HAWIYE MAXAY RABAAN?
HAWIYE waxay rabaan inay degaanadooda ka hergeliyaan afar maamul goboleed iyadoo dadka la degana awood qeybsiga laga siin doono jagooyinka sare .
Afarta maamul goboleed waxay kala yihiin -Galgaduud iyo Mudug oo noqon doono Maamul goboleedka Central State of Somalia, Hiiraan iyo Shabeeladda sare oo noqon doona Greenland State,Shabeeladda dhexe iyo Shabeelada hoose oo noqon doona Shabelle State ,iyo Banaadir State.
Dowladda dhexe waxaa loo madaxbanaaneyn doonaa sedex degmo oo Muqdisho ku taal kuwaas oo ay ka arrimin doonaan laakiin gacan ku heynta Dekadda iyo Garoonka Muqdisho waxaa la wareegi doono Maamul goboleedka Banaadir State of Somalia.
Hawiye waxay rabaan inaan Dekadda iyo Airport-ka Muqdisho laga biilin Siyaasi aan Canshuur ka soo qaadi karin degaanada uu dhalasho ahaan ka soo jeedo sida Ra’isulwasaare Cabdiwali iyo ku xigeenkiisa Ridwaan.
Ra’isulwasaare Cabdiwali waxaa looga fadhiyaa inuu dhaqaalo ka keeno Dekadaha Bosaaso iyo Kismaayo hadii taas uusan awoodina wuxuu ka dhigan yahay shaqsi dalanbaabiya oo timaha u xiirtay inuu dhaqaalaha Hawiye iska dhuuqo hadana ugu daro afxumo iyo cagajugleyn.
Ra’isulwasaare ku xigeenka Xukumadda Somalia Mr Ridwaan iyo siyaasiyiinta beesha Isaaq ee biisha dhaqaalaha ka soo baxa dekadda iyo garoonka Muqdisho waxaa la siinayaa mudo afar bilooda inay degaanadooda tagaan si ay dhaqaalo uga keenaan hadiise ay ku guuldareeystaan inay Canshuur ka soo qaadaan Dekadda Berbera waxay beesha Hawiye isku raacday inaan laga sii biilin ilaha dhaqaalaha Muqdisho.
Beesha Hawiye marka ay si rasmiya u dhisaan afarta maamul goboleed waxay wada hadal ka geli doonaan awood qeybsiga Jubooyinka sidaas darteedna hada uma diyaarsana inay ku mashquulaan arrinta jubooyinka.
Beesha Hawiye oo isku raacday dhismaha afarta maamul goboleed waxay magacaawdeen gudiyadda dhaqaalaha,gaashaandhiga ,dhaqanka iyo siyaasadda.
Gudiyadda la magacaabay waxay u badan yihiin Wasiiradda iyo Xildhibaanada Hawiye .
Ganacsatada iyo qurba joogta beesha Hawiye waxaa loo furayaa akoono ay lacagaha taageerada ku shubaan si loo muujiyo midnimada iyo hiil loo dhan yahay.
Bulshada ku abtirsatada beelweynta Hawiye waxay si wadajira Muqdisho ugu soo dhaweeyn doonaan Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federalka Abdullahi Goodax Barre si looga jawaabo geesinimada uu muujiyay.
Soo dhaweeynta Wasiir Goodax waxay noqon doontaa soo dhaweeyn heer Qaran sidaas darteed waxaa loogu baaqayaa bulshada inay taageero lixaadleh u muujiyaan Wasiirka.
Gudiyadda beesha Hawiye waxay dhamaan Somalida xasuusinayaan in Dowladda Federalka Somalia lagu dhisay awood qeybsiga sidaas darteedna Wasiirada iyo Xildhibaanadooda waxay metelaan beelahooda waana sababta ay Masuuliyiinta beelweynta Hawiye go-aan wadajira u qaateen.
Gudigga Beesha Hawiye waxay la kulmeen Saraakiisha Ciidamadda Amisom iyo Wakiilka Ethiopia ee arrimaha Somalia Jeneral Gabre,waxaana loo gudbiyay qadiyada guud sidaas darteed waxaanu joognaa xilligii wax wada qabsiga.
Beelweynta Hawiye waxay Calaamatu Su-aal dulsaartay sababta beesha Hargeysa oo sheegatay inay Somalia ka go-day ku qasbay inay ka hadlaan qadiyadda Shabeeladda hoose sidoo kalena waxaa muhiima in qof walba dareen gaara siiyo sababta Puntland ku qasabtay inay taageerto heshiis ku sheegi madaxda sare ee Dowladda ku aqoonsadeen Maamul ka kooban sedex gobol ,kaas oo looga gol leeyahay in lagu boobo dhulka beesha Hawiye?
Bulshada ku abtirsata beelweynta Hawiye waxaa looga digayaa inay ka feejignaadaan warxuma tashiilka cadawga beesha ee shakiga ka dhex abuura ,waxaana qof walba looga baahan yahay inuu xasuusto sidii beelweynta Hawiye leeysugu diray 1991 markii talada dalka ay la wareegeen Xoogagii USC.
Beelweynta Hawiye oo heeysata waaya aragnimo iyo qaladaadkii hore uga dhacay waxay sanadkaan 2014 u jeesatay inay beeniso dacaayada nacabka ee ku saabsan “HAWIYE TOWFIIQ MALEH” sidaas darteed maanta waxaanu joognaa xilli kala guura oo lagu jiro xaalad adag?
Xogtaan waxaa la ii igmaday inaan ku baahiyo Internet-ka ,waxaana ii xilsaaray gudigga beesha Hawiye.
Afarta Maamul goboleed